Snn Nepal शरीरमा पानी कमी भए के हुन्छ ? दैनिक कति पिउने ? – Snn Nepal
प्रायः मानिस, शरीरलाई चाहिने पर्याप्त मात्रामा पानी पिउँदैन । अमेरिकाको द नेसनल एकेडेमी अफ मेडिसिनले पुरुषहरूले दैनिक ३.७ लिटर र महिलाहरूले २.७ लिटर पानी खान सुझाएको छ । सुझावमा शरीरमा पर्याप्त मात्रामा पानी नभए नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताइएको छ ।
कोरोनाले बालबालिकामा संक्रमणभन्दा मनोवैज्ञानिक समस्या बढ्दो